Roland Quandt သည်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် Huawei Y7 (2019) ၏နောက်ဆက်တွဲဖုန်းအချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Huawei နှင့် ZTE နှစ်ခုစလုံးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များအားလုံးရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်လိမ့်မည်။
Huawei P30 ကို MWC 2019 တွင်တင်ပြမည်မဟုတ်ပါ
Huawei သည် MWC 2019 တွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် 5G နည်းပညာကိုအာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Huawei P30 ကိုတင်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
Huawei Pay သည်၎င်း၏ဥရောပချဲ့ထွင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်
Huawei ၏မူလအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကိုမူလက Huawei Pay ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီးယခုအခါရုရှား၌စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြီးလျှင်၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။
Huawei သည် ၂၀၁၈ တွင်ဖုန်းသန်း ၂၀၀ ကျော်သာလွန်ခဲ့သည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးကမ္ဘာအနှံ့ Huawei သို့တင်ပို့ခဲ့သောဖုန်းအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုရှင်းလင်းစေသည်။
ဒါက Huawei P30 Pro ရဲ့ဒီဇိုင်းလား။
ဤပြန်ဆိုချက်များကနောက်ထုတ်လုပ်မည့်နောက်ကင်မရာ ၄ ခုပါသောအာရှထုတ်လုပ်သူ၏ P series ၏နောက်အဖွဲ့ဝင် Huawei P30 Pro ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဒီဇိုင်းကိုပြသည်။
Huawei P30 တွင် 5X Zoom ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ကင်မရာသုံးလုံးသည်အရှုံးမရှိဘဲရရှိနိုင်သည်
Huawei P30 သည်စျေးကွက်တွင်နောက်ကင်မရာသုံးဆနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုမရှိသော 5X Zoom တို့ဖြင့်ရောင်းချမည်ဟုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာသစ်အရသိရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Huawei သည်ပစ္စည်းသန်း ၂၅၀ တင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားသည်
Huawei သည်၎င်း၏စီမံကိန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထုတ်ကုန်သန်း ၂၅၀ အထိတင်ပို့ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့။
Huawei သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ Nova ဖုန်း ၆၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်
Huawei သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ၆၅ သန်းကျော် Nova Series စမတ်ဖုန်းများကိုရောင်းချခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်ချဲ့ထွင်။
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android9Pie နောက်ဆုံးသတင်းသည် Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro အတွက်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်မကုန်မီ Huawei သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏သန်းပေါင်း ၂၀၀ တင်ပို့ရောင်းချလိမ့်မည်
ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Huawei သည်စမတ်ဖုန်းသန်း ၂၀၀ ကျော်တင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းခန့်မှန်းချက်များအရသိရသည်
Huawei P Smart 2019 အသစ်ကိုယူရို ၂၀၅ အတွက်အနည်းဆုံးထစ်နှင့် Kirin 710 ချစ်ပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်
Huawei P Smart 2019 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူရို ၂၀၅ ထက်မပိုသောဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်။
Huawei P30 Pro မျက်နှာပြင်ကာကွယ်သူများက၎င်းသည် 'ရေစက်' ထစ်ဖြင့်ရောက်ရှိမည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်တစ်ခုအရ Huawei P30 Pro သည် waterdrop notch နှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည်။ သင်၏ screen protector ယိုစိမ့်မှုကြောင့်၎င်းကိုတောင်းဆိုသည်။
၎င်းသည် screen ပေါ်တွင် embedded ကင်မရာပါသည့် Huawei Nova4ဖြစ်သည်
Huawei Nova4၏ထူးခြားချက်များ၊ အာရှထုတ်လုပ်သူမှပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်၏အနောက်ဘက်ကင်မရာကိုထူးခြားစွာဖော်ပြထားသည်။
ဤအမေဇုံကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Huawei P20 Pro ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့အမေဇုန်ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် Huawei P20 Pro ကိုစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုထပ်မံမပေးနိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Huawei Nova 4: screen ပေါ်ရှိအပေါက်၊ bezel အနည်းငယ်နှင့်နောက်ထပ် high-range အကြောင်းပိုမိုဖြစ်သည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်အရဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ဖြစ်မည့် Huawei Nova4၏ပုံရိပ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Huawei FreeBuds 2: အမှတ်တံဆိပ်၏နားကြပ်အသစ်
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် Huawei FreeBuds2၏ကြိုးမဲ့နားကြပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
Huawei မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းစနစ်အသစ်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်းကိုလာမည့်နှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများ၌စတင်ဖြန့်ချိမည်။
Huawei ၏ 5G နည်းပညာသည်နိုင်ငံများစွာမှယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei ၏ 5G နည်းပညာနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအတော်များများမှယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Huawei P30 Pro ၏အစွမ်းထက်သောကင်မရာအာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်
Huawei P30 Pro ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကင်မရာအပြင်အချို့သောဖြစ်ရပ်များမှာယိုစိမ့်ထွက်နေပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံး Sony အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Huawei Nova 4: 48 MP နောက်ကင်မရာနှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်
မကြာသေးမီကသင့်အား Huawei Nova4မှလွဲ၍ နောက်လာမည့် Huawei ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြခဲ့သည်။
Huawei Enjoy 9: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level range
Huawei Enjoy 9: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်အမျိုးအစားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက် Huawei နှင့် ZTE ကို 5G စီမံကိန်းမှထုတ်ပယ်သည်
Japan သည်တနင်္လာနေ့တွင် Huawei Technologies နှင့် ZTE ကို 5G စီမံကိန်းများ၏ပြည်သူ့ဝယ်ယူမှုမှထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Huawei P Smart (2019) ကို Android Pie ဖြင့် Geekbench တွင်တွေ့ရသည်
Huawei P Smart (2019) သည် Android 9.0 Pie ဖြင့် operating system အဖြစ် Geekbench ကိုဖြတ်သန်းသည်။ ဒီယိုစိမ့်မှုအသေးစိတ်ကိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova4၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကယခုလတွင်တွေ့ရမည့်၎င်း၏ဖန်သားပြင်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ embedded ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် Huawei Nova ဖုန်း၏တင်ပြချက်။
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Huawei Mate 20 X ၏စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ယခုအပတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Huawei Mate 20 Pro သည်အကျော်ကြားဆုံးထောက်လှမ်းရေးစမ်းသပ်မှုကိုခံယူခဲ့သည်
Huawei Mate 20 Pro သည်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကို JerryRigEeverthing မည်သို့ခံယူသည်ကိုလေ့လာပါ။ ဖုန်းကစာမေးပွဲအောင်မသွားကိုစစ်ဆေးပါ။
Huawei Mate 20 ကို Orange နှင့်ထားကာ Huawei Watch GT ကိုအခမဲ့ရယူပါ
Huawei Mate 20 ကို Orange တွင်လက်ဆောင်အဖြစ် Huawei Watch GT ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းကို Orange နှင့်အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိရှာဖွေပါ။
လပေါင်းများစွာကောလဟာလများအပြီးတွင် high-end terminal အကြောင်းပြောသောအခါအာရှကုမ္ပဏီသည် Mate 20 အကွာအဝေးကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။ Androidsis တွင်၎င်းကိုကျန်စျေးကွက်ရှိအဆင့်မြင့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Huawei Mate 20X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယခုတင်ပြသော Huawei ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 RS Porsche ဒီဇိုင်း - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်စျေးနှုန်း။ တင်ပြပြီးဖြစ်သော Huawei ၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Wear ကိုမေ့လိုက်ပါ GPS နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာကိုမသုံးပါကနှစ်ပတ်ကြာသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရောက်သော Huawei Watch GT အသစ်နှင့်အတူပါ။
Huawei Mate 20 နှင့် Mate 20 Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Enjoy9Plus နှင့် Enjoy Max တို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Huawei သည်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal အသစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Huawei Enjoy9Plus နှင့် Enjoy Max တို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုငါသိ၏။
Huawei Mate 20 တင်ပြချက်ကိုမည်သို့လိုက်နာရမည်နည်း
Huawei Mate ၏တင်ဆက်မှုကိုမည်သို့လိုက်နာရမည်နည်း ၂၀။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဥရောပရှိ Huawei Mate 20 Pro ၏စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Huawei Mate 20 Pro ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရက်စွဲကိုစစ်ထုတ်သည်။ ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ဥရောပ၌အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် lithium-silicon ဘက်ထရီများကိုကြေငြာသည်မှာအလွန်မြန်ဆန်သောအားသွင်းခြင်း
Huawei သည် Lithium-Silicon အမျိုးအစားဘက်ထရီအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလက်ရှိ Lithium-Ion ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့သည်ဤပြိုင်ဆိုင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်
Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့စတင်ပြီးသည့်နောက်တွင် high-end range ကိုတိုးချဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးသော terminal ကိုရှာရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
ဂိမ်းကစားသူများအတွက် Huawei Mate 20X ရှိလိမ့်မည်
တရားဝင် - ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အထူး Huawei Mate 20X ရှိလိမ့်မည်။ ဖြစ်ရပ်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြမည့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Pro သည်ယခုနှစ်တွင်အင်အားအရှိဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်ဟု AnTuTu ၏စမ်းသပ်မှုများအရသိရသည်
Huawei Mate 20 Pro ကို AnTuTu တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်စွမ်းအားအရှိဆုံး Android terminal များထက်သာလွန်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Android Pie beta သည်ဥရောပရှိ Huawei P20 Pro ကိုစတင်ရောက်ရှိပြီ
ဥရောပရှိ Huawei P20 Pro သည် Android Pie beta ကိုရရှိသည်။ ဤ beta သို့ဖုန်းများအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Mate 20 သည် Kirin 980 နှင့်အတူ Geekbench တွင်ပြသခဲ့သည်
Huawei ၏ Mate 20 သည် Kirin 980 နှင့်အတူ Geekbench Benchmark တွင်ထင်ရှားသည်။ ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောရမှတ်များကိုရှာဖွေပါ။
Huawei Mate 20 Lite သည် ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Kirin 6.3၊ ၃,၇၅၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
Huawei Mate 20 Lite သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏ kirin 710 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
Kirin 980: Huawei ၏စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Huawei သည် Kirin 980 ကို၎င်း၏စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာကိုပေးသည်။ IFA 2018 မှာတင်ထားတဲ့အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းအားလုံးရှာပါ။
Honor Magic 2: high-end အသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်၏ကြေငြာချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည် Android 9.0 Pie beta ကိုဖုန်း ၉ လုံးအတွက်ပေးသည်
Huawei သည် Android 9.0 Pie beta ပရိုဂရမ်ကိုဖုန်း ၉ လုံးအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဤ beta အစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Kirin 980 ကိုလာမည့်သုံးလပတ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်
Huawei သည် Kirin 980 ကိုနောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ဤဟွာဝေလုပ်ငန်းစဉ်၏စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Magisk သည် Huawei ဖုန်းများပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ
Magisk သည် Huawei ဖုန်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 နှင့် Mate 20 Pro တို့ကို Android Pie ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Huawei Mate 20 တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် Android Pie ရှိသည်။ Huawei ဖုန်းအသစ်များအသုံးပြုမည့် operating system အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
TalkBand B5, HuOLi ၏ AMOLED မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အသစ်စက်စက်
၀ တ်ဆင်နိုင်သောဈေးကွက်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသည့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကထားသည်မှန်သော်လည်း Huawei သည်ကျွန်ုပ်တို့အား TalkBand B3 ၏ဆက်ခံသူသို့ပို့ဆောင်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်က ၀ တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ၀ တ်စုံအသစ်အကြောင်း TalkBand B5 အကြောင်းပြောနေတာပါ။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Kirin 710: Huawei မှအလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova 3: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ အလယ်အလတ်တန်းစားပရီမီယံ - တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Nova 3i ကို Aliexpress တွင်ကြိုတင်ဖော်ပြထားသည်
Huawei Nova 3i သည် Aliexpress ကိုလုံးလုံးပေါက်ကြားခဲ့သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 10 နှင့် P20 တို့ကိုသြဂုတ်လတွင် GPU Turbo ရရှိမည်ဖြစ်သည်
GPU Turbo သည်သြဂုတ်လတွင် Huawei Mate 10 နှင့် P20 သို့လာမည်။ ဤနောက်ဆုံးသတင်းကိုတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများသို့ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova3နှင့် Nova 3i တို့ကိုဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာမည်။ စျေးကွက်သို့ဤမော်ဒယ်များရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei TalkBand B5 ကိုဇူလိုင် ၁၈ ရက်တွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
Huawei သည်ဇူလိုင် ၁၈ ရက်တွင် Huawei TalkBand B5 ကိုမိတ်ဆက်မည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏လက်ကောက်အသစ်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည်သင်နားကြပ်များသိမ်းဆည်းရန်စမတ်နာရီကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏မူပိုင်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Watch2(2018) - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယခင်မျိုးဆက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသစ်သောအရာများဖြင့်မထားခဲ့သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏နာရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Unboxing လုပ်ခြင်းနှင့် Huawei P20 PRO ၏ပထမဆုံးဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများသည်စာသားအတိုင်းအတာတိုင်းကိုထိုးနှက်နေသော Huawei ၏ထိပ်တန်းထိပ်တန်းဖြစ်သည်။
Huawei Enjoy 8e - Android 8.1 Oreo ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်
Huawei သည် Huawei Enjoy 8e ကိုအာရှမှနောက်ဆုံးပေါ် Android OS ဖြင့်အဆင့်နိမ့်သောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။ ဒီမိုဘိုင်းဟာအတော်လေးပျက်စီးနေတဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့အတူပါ ၀ င်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိပ်သဘောကျတဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပါးလွှာသော 18:9အမျိုးအစားရှိသော panel တစ်ခုရှိသည်။
terminal အသစ်တစ်ခုကိုစျေးကွက်သို့မိတ်ဆက်တိုင်းတိုင်းသည်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်အင်္ကျီများသည်အသွင်အပြင်များအများဆုံးရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ Huawei P20 ၏ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင့်အားပြသသည်။
Huawei သည်တက်ဘလက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဖုန်းကိုမူပိုင်ခွင့်တင်ထားသည်။ ဤဖုန်းအမျိုးအစားတွင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသောတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမကြာမီဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်သင့်သည်။
Huawei P20 ၏အတုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်သည် Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့သည် Huawei P20 ၏အတုပိုင်းဆိုင်ရာအသိဥာဏ်ရှိလိမ့်မည်။ ဒီအတုထောက်လှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိမည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Enjoy 8 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်ထုတ်လွှင့်သည်
Huawei Enjoy 8 ကိုတွေ့ပါ။ ကိရိယာတစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ကတိတော်များနှင့်အညီကောင်းစွာချိန်ညှိထားသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါးလွှာသော 18:9panel၊ Qualcomm SD430 ပရိုဆက်ဆာနှင့်လှပသောစားပွဲပေါ်တင်ထားသည့်မျှတစွာပွတ်ထားသောဒီဇိုင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ , ကြော့နှင့်အစွမ်းထက်မိုဘိုင်း။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Huawei Y7 Prime (၂၀၁၈) နှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ ကုမ္ပဏီ၏အနိမ့်ဆုံးလူလတ်တန်းစားများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei Y7 Prime (၂၀၁၈) အားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည့် terminal ကိုတင်ပြသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စီးပွားရေးစမတ်ဖုန်းသည်မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုမျှမပြုလုပ်ဘဲစျေးကွက်၏နေရာအတော်များများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ဒီအကွာအဝေး။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Huawei P20 Lite: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ အခမ်းအနားတွင်တရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P20, P20 Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei ၏တင်ဆက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်၊ Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite အသစ်နှင့်ပိုမိုသောအရာများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မည်သို့ကြည့်မည်နည်း
Huawei ၏ Paris တွင်တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုရန် streaming နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောဤနေရာသည်လူကြိုက်များသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ P စီးရီးမော်ဒယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P20, P20 Pro နှင့် P20 Lite အသစ်၏တင်ဆက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်သည်။
Huawei သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်အရောင်းရဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အမျိုးသားစျေးကွက်တွင်ရောင်းချမှုနှင့်ယခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏ဝေစုများအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ရော Apple ရောရော 512 GB ပါ ၀ င်သည့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကို Huawei ကထုတ်လုပ်လိမ့်မည်
စျေးကွက်အတွင်းသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 512 GB ရှိသည့် terminal ကိုပထမဆုံးစတင်ထုတ်လုပ်သည့် Huawei ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကညွှန်ပြနေပုံရသည်။
LigthInTheBox တွင်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းအတွက် Honor 6X ကိုရယူပါ
Huawei Honor 6X သည်အာရှအွန်လိုင်းစတိုး LighInTheBox တွင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမယုံနိုင်စရာကောင်း။ လက်မခံနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၀ ယ်လိုသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၈၉.၉၉ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ယူရိုတွင် ၁၅၂ ယူရိုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အခွင့်ကောင်းယူသည်!
Huawei Pay, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသည်မကြာမီဥရောပသို့ရောက်ရှိလာတော့မည်
Huawei Pay သည်ဥရောပသို့တရားဝင် ၀ င်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S11 နှင့် S9 + တို့ကိုမယှဉ်ပြိုင်ရန် Huawei P9 ကိုလွှတ်တင်ရန်နှောင့်နှေးခဲ့သည်
Huawei P11 သည် MWC 2018 အတွင်းမရောက်ရှိနိုင်ဘဲAprilပြီလတွင်ပေါ်လာမည်၊ မမျှော်လင့်သောနှောင့်နှေးမှုနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိသည်။
Huawei P Smart - ဒီအလားအလာရှိတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုသည်
Huawei P Smart: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ ဈေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့သည် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းစျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်နိုင်မည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei Mate 10 Pro ကိုဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင်အမေရိကန်သို့ရောက်ရှိမည်
Huawei သည် Las Vegas ရှိ CES တွင်ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင်အမေရိကန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာမည့် Huawei Mate 10 Pro နှင့်အတူလာမည်။
Huawei Enjoy 7S ကိုကမ္ဘာအနှံ့ Huawei P Smart အဖြစ်ရောင်းချမည်
Huawei P Smart - Huawei Enjoy 7S ၏နိုင်ငံတကာနာမည်။ Huawei မော်ဒယ်၏နိုင်ငံတကာဖြန့်ချိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်မည့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုလူသိများသည်။ လာမည့်နှစ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စတင်မည့်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia နှင့် Huawei တို့သည် Xiaomi နှင့်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီတို့နှင့်အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မူပိုင်ခွင့်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်
Huawei P10 နှင့် P10 Plus တို့သည် Android Oreo ကိုစတင်ရရှိသည်
နောက်ဆုံးပေါ် Huawei terminal မ်ားဖြစ်သော P10 range ကို Android Oreo ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Huawei Enjoy 7S သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိပါ
Huawei Enjoy 7S: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ Huawei ကိရိယာအသစ်နှင့်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ပေါက်ကြားနေသောပုံများနှင့် Huawei P11 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
လာမည့် Huawei terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ဤသည် Huawei P11, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူရောက်ရှိလာမယ့် high-end သည်။
Huawei Enjoy 7S အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်
ထုံးစံအတိုင်း Huawei Enjoy 7S မတိုင်မီအသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်နောက်ဆုံး terminal သည်
ဤဆောင်းပါး၌ Huawei Mate 10 Pro မှလာသည့်နောက်ခံပုံအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ download လုပ်နိုင်သည်ကိုသင့်အားပြသည်
Huawei Nova 2S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။ မကြာခင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ phablet အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နာမည်ကျော် Huawei Nova စီးရီးသည်အခြားအဖွဲ့ဝင်သစ်တစ်မျိုးကိုလက်ခံတော့မည်ဖြစ်သည်။ Huawei Nova 2S သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal တစ်ခုအဖြစ်ကတိပေးသည့်အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်း။
တင်ဆက်မှုမတိုင်မီလအနည်းငယ်အလိုတွင်၊ Huawei P11 Plus ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များသည်တရုတ်လူမှုကွန်ယက် Weibo တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Huawei Enjoy 7S: ၁၈း၉ မျက်နှာပြင်နှင့် dual-camera ပါဝင်သည့်နောက်ထပ် terminal တစ်ခု
Huawei သည် ၁၈း၉ မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး bezels လုံးဝနီးပါးမရှိဘဲကင်မရာနှစ်လုံးပါသောဖန်သားပြင်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Huawei Enjoy 18S ဖြစ်သည်။ မင်းသူ့ကိုသိသေးလား
Huawei Mate 10 Lite အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Huawei Mate 10 Lite: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတည်ပြုထားသည်။ Huawei ၏ဖုန်းအသစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Maimang6ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE သည်ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်း ZTE Axon M ကိုပထမဆုံးကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော် Huawei သည်ကိုယ်ပိုင် dual-screen mobile ကို ၂၀၁၈ တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Huawei Mate 10 Pro သည် iPhone 8 နှင့် Note 8 ကိုကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့်သာလွန်သည်
Huawei Mate 10 Pro ကိုယခုအပတ်တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့ပြီး DxOMark သည်၎င်း၏ကင်မရာအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Huawei Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro - ထူးခြားချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရနိုင်မှု
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းများနှင့် Huawei Mate 10 အသစ်နှင့် Huawei Mate 10 Pro တို့၏ ၆ GB အထိ RAM အထိရရှိနိုင်သောရက်စွဲများကိုရှာဖွေပါ။
Huawei Mate 10 ကို Windows Phone ၏ Continuum နှင့်ဆင်တူသည်
Windows Phone Continuum ကဲ့သို့သောစနစ်တစ်ခုကို Huawei က၎င်း၏ Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့၏အထင်ကရနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Huawei Mate 10 Pro ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ပြီး Leica ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့်အာရှ fbarica ၏ Mate မိသားစု၏အထင်ကရသစ်
နောက်ဆုံးပေါ် Huawei Mate 10 ပုံရိပ်များသည်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေဖတ်သည့်နေရာရှိ terminal ၏ရှေ့နှင့်အနောက်ကိုပြသသည်။
Huini ၏ပြောကြားချက်အရ Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာသည် Samsung နှင့် Apple တို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်
Huawei သည်နောက်ထပ် Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကို Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာအသစ်များနှင့်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။
Huawei Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကိုအောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင်မြူးနစ်တွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး AI စွမ်းရည်ရှိသော Kirin 16 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
Huawei Nova2ကို Nova2မိသားစုဝင်အသစ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးသောဗီဒီယိုသည်လူမီနီယံကိုယ်ထည်နှင့်အစွမ်းထက်သော hardware နှင့်အတူဖြစ်သည်။
Huawei Nova2Plus ကို၎င်းကို IFA 17 တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Huawei Nova2Plus၊ ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution နှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ရှိသောဖုန်းကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ။
ဂုဏ်ပြုမှော်, IFA 2017 မှာပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ
IFA Berlin ရှိ Huawei နှင့် Honor တဲအတွင်းရှိ Honor Magic ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း။ သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အခြားဖုန်းတစ်လုံး
ဤသည်မှာလာမည့် Huawei Mate 10 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာများဖြစ်သည်
Huawei သည်၎င်း၏ flagship အသစ်ဖြစ်သော Huawei Mate 10 ကိုမကြာမီတင်ပြတော့မည်။ ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်သည်။
Huawei Nova2သည်ဥရောပသို့ရောက်ရှိသည်။ သင်၏စျေးနှုန်းကိုသိသလား။
Huawei Nova2အသစ်ကိုမကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခက်ခဲမှာဖြစ်ပြီးခက်ခဲတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကအတားအဆီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Huawei Mate 10 ၏ဗွီဒီယိုသည်မိုဘိုင်း၏ dual ကင်မရာကိုအလေးထားသည်
Huawei Mate 10 ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုခွေသည်လာမည့် phablet ၏ Leica dual နောက်ကင်မရာစနစ်နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံအချို့ကိုပြသသည်။
Huawei သည်ဥရောပရှိ Apple ထက်ပိုမိုရောင်းချသည်
Huawei သည် Samsung ၏နောက်တွင်ဥရောပ၌ဒုတိယအကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာပြီး Apple ကိုတတိယနေရာတွင်ထားခဲ့သည်
Huawei သည်အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် Mate 10 ၏တင်ဆက်မှုအတွက်ဖိတ်ကြားမှုများကိုပေးပို့သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည်အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင်ဂျာမနီတွင်မီဒီယာအသစ်အတွက် Mate 16 ကိုတင်ဆက်မည့်မီဒီယာပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားမှုများကိုပေးပို့သည်။
Huawei Mate 10 ၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံများနှင့်လာမည့် Huawei Mate 10 phablet ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ဂုဏ်ပြု 8 Pro ကို, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အမြင်
ဗွီဒီယိုနှင့်စပိန်ဘာသာဖြင့် Honor 8 Pro ၏ဆန်းစစ်ချက်၊ QHD ဖန်သားပြင်ကြောင့်၎င်း၏အလင်းနှင့်အတူထွန်းလင်းနေသောအာရှထုတ်လုပ်သူ၏ phablet ။
အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Huawei ၏စီအီးအိုကပြောကြားရာတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အဆင့်မြင့်အာရုံစိုက်ရန်ကဏ္ sector ၏နိမ့်ကျသောအရာများကိုဘေးဖယ်ထားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စပိန်ဘာသာဖြင့် Huawei Watch2၏လေ့လာမှု၊ nano SIM slot နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော GPS ပါဝင်သည့် Huawei စမတ်နာရီသစ်
သင်၏ Huawei P9 Lite တွင်အတည်မပြုရသေးသော Android Nougat ဗားရှင်းကိုသင်တပ်ဆင်ထားပြီးတည်ဆောက်မှုနံပါတ်သည်စမ်းသပ်မှုသော့များလား။ ဒီမှာမင်းမှာအဖြေရှိတယ်
ယူရို ၃၀၀ အောက်မကျသောဖုန်းကောင်းတစ်လုံးကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဂုဏ်ပြု 300 နှင့်အတူဤ bargain လက်လွတ်မနေပါနဲ့
Honor 8 ဈေးနှုန်းသည်သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီးယခုအခါအမေဇုံမှတစ်ဆင့်ယူရို ၂၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်
သင့်မှာ Android Nougat မရှိသေးဘူး၊ သင့်ဖုန်းကုမ္ပဏီကသင့်ကို update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသလား။ ကြာကြာမစောင့်ပါနှင့်အခမဲ့ဗားရှင်းသို့ပြောင်းပါ
မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်သတင်းများအရ Huawei သည် Apple ထက်စျေးကွက်ဝေစုပိုများကြောင်း၊ ကာလီဖိုးနီးယားကုမ္ပဏီထက်မိုဘိုင်းရောင်းအားပိုမိုများပြားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သင်ဟာ Nougat နှင့် Huawei P9 Lite တွင် root ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမခံစားနိုင်သေးပါက၊ ဤသင်ခန်းစာကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြရန်ဤဖိုရမ်ကိုလိုက်နာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Huawei သည် Honor Band3စတင်ရန်ပြင်ဆင်သည်
Huawei သည် Honor3စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ Honor Band 12 စမတ်ဖုန်းကိုဇွန် ၁၂ ရက်တွင်ကြေညာခဲ့သည်
Honor9ကိုရှန်ဟိုင်းတွင်ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်
SoC Kirin 12 နှင့်အတူလာမည့်လာမည့် Huawei Honor9စမတ်ဖုန်းကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့အဖြစ်ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Huawei သည် iPad Pro အသံဖြင့် MediaPad M3 Lite 10 တက်ဘလက်ကိုပြသသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည့် MediaPad M3 Lite 10 တက်ဘလက်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသဖြင့်ကြီးသောအသံစနစ်နှင့်အသံစနစ်ကျယ်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည် Huawei Nova2စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုပင်မကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်ရှေ့ကင်မရာ 20 megapixel ပါ ၀ င်သည်
Huawei P10 Plus၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စပိန်ဘာသာဖြင့် Huawei P10 Plus၊ စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသော Huawei ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်
Knock 8 စျေးနှုန်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Honor XNUMX Pro ဖြစ်သည်
Honor 8 pro သည်အသစ်စက်စက် Honor ၏အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အချောသတ်များ၏အရည်အသွေး၊ အတွင်းပိုင်းပါဝါနှင့်အရှုပ်တော်ပုံများမှာထင်ရှားပေါ်လွင်သည် - € 519
အလူမီနီယံကိုယ်ထည်၊ အစွမ်းထက်သော hardware နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာစနစ်တပ်ဆင်ထားသောအလယ်အလတ်ဖုန်းဖုန်း Honor 6X ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
Huawei Mate9ကိုမေလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Agate Red နှင့် Topaz အပြာရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။
Huawei Nova2တွင် TENAA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Huawei Nova2သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် TENAA ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပိုမိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်
Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ Enjoy7Plus ကို 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်မှုဖြင့်အဆင့်မြှင့်သည်
စတင်မိတ်ဆက်ပြီးဆယ်ရက်အကြာတွင် Huawei သည် Enjoy7Plus ကို 4GB ဗားရှင်းနှင့်သိုလှောင်မှု 64GB ပါရှိသည်
Huawei သည်၎င်း၏ P10 နှင့် P10 Plus စမတ်ဖုန်းများတွင်မတူညီသောချစ်ပ်များအသုံးပြုခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
Huawei သည် P10 နှင့် P10 Plus စမတ်ဖုန်းများတွင် RAM နှင့်သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်များအသုံးပြုသည်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ဤသည် Honor 8 Pro သည်ထုတ်လုပ်သူအသစ်၏အဓိကကျသောကဏ္ new ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S8 နှင့် Huawei P10 တို့အကြားအကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း ၂ ခု၏နှိုင်းယှဉ်ချက်အပြည့်အစုံကိုမမေ့ပါနှင့်
Huawei P10 နှင့် Huawei P9 တို့ကိုပြောင်းလဲသင့်ပါသလား။
လက်ရှိ Huawei P10 နှင့် Huawei P9 တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်လက်ရှိ flagship နှင့်၎င်း၏အရင်ထုတ်လုပ်မှုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်
Huawei P10 ၏ dual camera သည် DxOMark ကိုအံ့အားသင့်စေသော်လည်း Google Pixel ထက်သာလွန်သည်
Huawei P10 သည် DxOMark တွင် ၈၇ မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး iPhone 87 ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Google Pixel သို့မဟုတ် Galaxy S7 Edge ကိုအောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဂုဏ်အသရေ ၉၊ Huawei သည်Aprilပြီ ၅ ရက်အတွက်သတင်းများပြင်ဆင်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည်လာမည့်Aprilပြီလ ၅ ရက်တွင်အထူးပွဲပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းသည် Honor5၏တရားဝင်ပစ်လွှတ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Android အတွက် Mid-range အသစ်၏အကောင်းဆုံး
ဒီနှစ် Mobile World Congress မှထိပ်တန်းအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းသစ်သုံးခုကိုရွေးချယ်ခြင်း
ဘာစီလိုနာရှိ MWC10 တွင်တင်ပြခဲ့သော Huawei P10 နှင့် Huawei P17 Plus တို့၏နည်းပညာအသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဂုဏ်ပြု 5X, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အမြင်
ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စပိန်ဘာသာ၏ Honor 5X တွင်ယူရို ၁၉၉ ကုန်ကျပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းရှိသည်
Curve edge နှင့် model ဖြစ်သော Huawei P10 Plus ၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
Huawei P10 Plus သည်ရှေ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်ကွေးညွှတ်နေသောဘက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Galaxy S8 နှင့်ဆင်တူချက်များစွာရှိသည်။
၎င်းသည် Huawei P10 အတွက်အရောင်များဖြစ်သည်
Huawei မှသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်စျေးကွက်သို့ရောက်သောအခါ Huawei P10 ရရှိနိုင်မည့်အရောင်သုံးမျိုးကိုပြသထားသည်။
လာမည့် Huawei P10 နှင့် P10 Plus အကြောင်းကိုအားလုံး
ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲများ၊ မော်ဒယ်များ၊ လာမည့် Huawei P10 ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုအထိကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်
Huawei သည် Honor V9 တင်ဆက်မှုပွဲသို့ဖိတ်ကြားမှုများပေးပို့သည်
Honor V9 သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ပြန့်နှံ့နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၊ Huawei P10 နှင့် Huawei P10 Plus တို့၏ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းကိုအာရှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၏အထင်ကရနေရာများမှာစစ်ထုတ်ထားသည်
ဤ Honor 6X သည်ခက်ခဲသောခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် Honor 6X သည်အခက်အခဲပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး Huawei နှင့် Honor ဖုန်းအသစ်၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုပြသခဲ့သည်။
ဂုဏ်ပြု 8, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Honor 8 ၏အလွန်ဆန်းကြယ်သောဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည့်ဖုန်းနှင့်ကဏ္ the ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကိုဆန်းစစ်ခြင်း
Huawei P10 Plus သည် ၅.၅″ Quad HD မျက်နှာပြင်၊ iris scanner နှင့် ring flash တို့ကိုစစ်ထုတ်သည်
ယခုလကုန်တွင် MWC 10 သို့ရောက်ရှိရန်ပြင်ဆင်နေသည့် Huawei P2017 Plus ၏ကောလာဟလသတင်းများနှင့်အတူယိုစိမ့်မှုရှိသည်။
Huawei သည် Huawei P8 Lite 2017 ကိုစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများနှင့်အတူရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုတင်ဆက်လိုက်သည်။
Huawei Watch2သည်လာမည့်လတွင်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များအထောက်အပံ့ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
Huawei Watch2သည်လာမည့်လတွင်လွတ်လပ်သောအသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်လာမည့် Android Wear 2.0 နှင့်အတူတရုတ်ထုတ်လုပ်သူထံမှလာလိမ့်မည်။
Huawei P10 ကို၎င်း၏ကွေးသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြန်လည်စစ်ထုတ်သည်
rendering အသစ်က Huawei P10 မွာရှေ့ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ သူက curved edge screen နဲ့အတူ Huawei Mate9ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာမယ့်သင်္ဘော isnignia
Huawei P9 ကိုနောက်ရက်သတ္တပတ်တွင် Nougat သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်ကြောင်းတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။